အိမ်မှာမြန်မြန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဝိတ်ချနည်း / Effervescent တက်ဘလက် Keto Guru
စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုတိုးတက်စေခြင်း - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ခုလုံး
အဆင့် ၁ ။ အစာချေဖျက်နိုင်သောကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုပြင်းထန်စွာကန့်သတ်ပါ
အင်ဆူလင်ပမာဏကျဆင်းသောအခါခန္ဓာကိုယ်သည်အဆီသိုလှောင်မှုများကို သုံး၍ ဘဝအတွက်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သောအကျိုးဆက်မှာနေရာအနှံ့ဟော်မုန်းများရပ်တန့်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျောက်ကပ်သည်ပိုလျှံသောရေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှုဖြစ်သည်။ရလဒ်အနေနှင့်၊ အထူးပြင်ဆင်မှုမရှိလျှင်၊ သင်ပိုကြီးပြီးပိုလေးစေသောပိုလျှံအရည်ကိုဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းတဲ့အစားအစာကိုစားတဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပထမအပတ်မှာ ၄. ၅ ကီလိုဂရမ်အထိကျသွားတယ်။များသောအားဖြင့်ဒီကိန်းဂဏန်းကပိုများတယ်။
ထူးခြားသည်မှာအစားအစာ၌အဆီပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်လူတို့သည်ကယ်လိုရီကိုရေတွက်နေဆဲဖြစ်ပြီးအစာအာဟာရချို့တဲ့ခြင်း (၎င်းတို့သည်ဗိုက်ဆာသည်) ခံစားခဲ့ရသည်။ထိုအချိန်တွင်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကန့်သတ်ထားသောအစားအစာများမည်မျှပင်ရှိစေကာမူနောက်လိုက်များသည်ပြည့်ဝသည်အထိစားနိုင်ကြသည်။
သကြားကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း၏သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာဆာလောင်မှုကိုသိသိသာသာလျော့ကျစေပြီးပြည့်ဝမှု၏ခံစားမှုသည်စောစောလာသည်။၎င်းသည် autopilot တွင်အလွန်အကျွံဆန္ဒမပါဘဲလိုက်နာသောအစားအစာကိုလိုက်နာသည်ဟူသောအချက်ကို ဦး တည်သည်။သက်တောင့်သက်သာရှိသောကိုယ်အလေးချိန်သည်သန်းပေါင်းများစွာသောအိပ်မက်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆင့် ၂ - ပရိုတင်း၊ အဆီနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားပါ
ညီညွတ်မှုသည်ဤတွင်အရေးကြီးသည်။ အစာတိုင်းတွင်ပရိုတင်း၊ အဆီနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါ ၀ င်သင့်သည်။
ဤစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်သင်သည်တစ်နေ့လျှင် ၂၅-၅၀ ဂရမ်အတွင်းကစီဓါတ်ကိုကန့်သတ်ရန်ပန်းတိုင်သို့အလိုအလျောက်ရောက်လာလိမ့်မည်။
အသား - အမဲသား၊ ကြက်သား၊ ကြက်ဆင်၊ ဝက်သား၊ သိုးသား
ငါးနှင့်ပင်လယ်စာများ - pike perch, perch, salmon, trout, ပုစွန်။
ကြက်ဥ - ကြက်သားနှင့်ငုံး။
အချက်အလက်အချို့အရယေဘူယျအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့ကျခြင်းသည် ၆၀% (! )
ကိုယ်အလေးချိန်လျင်မြန်စွာကျသွားပုံကိုအံ့သြသောအခါ၎င်းသည်ပရိုတိန်းဓာတ်၏ဘုရင်အားလက်အောက်ခံခြင်းအတွက် ၀ မ်းမြောက်စွာတင်ပြရကျိုးနပ်သည်။
ထက်သန်သောမျက်လုံးဖြင့်စာရင်းတစ်ခုလုံးကိုကြည့်ပါ။အသုပ်များအလွန်အကျွံစားရန်မကြောက်ပါနှင့်။တစ်နေ့ကိုအသုပ်ပန်းကန်ပြား ၅ ပြားတောင်မှမင်းရဲ့ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်စားသုံးမှု (တစ်နေ့ ၂၅-၅၀ ဂရမ်) ကိုကျော်လွန်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။
ထောပတ် (အသင့်အတင့်) ။
ပထမ ဦး ဆုံးအဆီ ၂ မျိုးကိုချက်ပြုတ်နေစဉ်အအေးမခံဘဲအပူပေးပြီးသုံးသင့်သည်။သူတို့မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဖက်တီးအက်စစ်များဖြစ်တဲ့ Omega 3, 6,9တို့ပါ ၀ င်သည်။
များစွာသောကိုယ်အလေးချိန်ကျသောပရိတ်သတ်များ၏အမှားကိုမပြုလုပ်မိပါစေနှင့်၊ အစားအစာနှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပေါင်းတည်းဖြစ်အောင်မပေါင်းပါနှင့်။ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် (သို့) အဆီနည်းသည်ကိုသင်ရွေးချယ်ရမည်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အစားအသောက်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားဖို့အလွန်ခက်ခဲပြီးဖွဲ့စည်းမှုကိုအားနည်းစေအောင်လုပ်ရတာအလွန်လွယ်ကူပါတယ်။
အပိုင်းလေးအာဟာရသည်သင့်ကိုမကျွေးသင့်ပါ။ တစ်နေ့လျှင် ၃-၄ ကြိမ်၊ အညီအမျှခွဲပါ။သို့မဟုတ်အဓိကအစားအစာ ၃ လုံးနှင့်နောက်ထပ် ၁ ခု (ဒုတိယနေ့နံနက်စာ (သို့) နေ့လည်စာ)
နိဂုံးအစားအစာတစ်ခုစီ = ပရိုတင်း + အဆီ + ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနေ့စဉ်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ပမာဏ ၂၅-၅၀ ဂရမ်အတွင်းရှိသည်။
အဆင့် ၃ - အားကစားကျွမ်းဘားကိုတစ်ပတ် ၃ ကြိမ်လုပ်ပါ
၎င်းသည်ရိုးရှင်းသည်။ တစ်ပတ်လျှင် ၃-၄ ကြိမ်လေ့ကျင့်မှု၊ ဂန္ထဝင်နည်းလမ်းအတိုင်း၊ သွေးပူခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်ခြင်း - ဆန့်ခြင်း
အစပြုသူများအတွက်ကိုယ်ပိုင်လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ပြုလုပ်ရန်နည်းပြတစ် ဦး ထံပြောင်းခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ထို့နောက်လိုအပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းအားလုံးကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မည်။မှတ်ထားပါ။အလေးချိန်ရှိသောကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းသည်ဂရုတစိုက်နည်းစနစ်လိုအပ်သည်။၎င်းသည်ဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်ရလဒ်အမြန်ရရှိရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုများစွာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကိုပြပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်ကယ်လိုရီများကိုအထူးစွန့်ပစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲလေ့ကျင့်ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအထိဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်ခွန်အားရှိသောစက်များ၊ kettlebells များနှင့် barbell အမျိုးအစားတို့သည်သင့်အားလက်ခံနိုင်စရာမရှိလျှင်မိနစ် ၄၀ ကြာအဆက်မပြတ်ပြင်းထန်သောအေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုအာရုံစိုက်ပါ။အမြန်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ အေရိုးဘစ်ခြေလှမ်းစသည်
အကျဉ်းချုပ်ကာယပညာအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သည်။ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အေရိုးဘစ်လေ့ကျင့်ခန်းကအောင်မြင်မှုရလိမ့်မယ်။အဓိကအရာကရွှေ့ဖို့ပါ။ပုံမှန်နှင့်တက်ကြွစွာ - တစ်ပတ် ၃-၄ ကြိမ်
ဤပိတ်ရက်ကိုသုံးသောအခါအလွန်အန္တရာယ်ရှိသောသကြားများ (အချိုများ၊ အချိုပွဲများ၊ ရေခဲမုန့်) များကိုရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ဒါပေမယ့်သင့်မှာကျန်းမာတဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုရှိတယ် - စီရီရယ် (buckwheat, ပြောင်း, ဆန်), အာလူး, သစ်သီးများ။
သို့သော်၎င်းကိုတစ်ပတ်တစ်ခါ ၁ ရက်သာမှတ်သားရန်လိုသည်။ဝန်အရေအတွက်တိုးလာခြင်းဖြင့်အရေပြားအောက်ရှိအဆီပိုမပါသောပိန်သောကိုယ်ခန္ဓာ၏ပန်းတိုင်မှသင်အဝေးသို့ထွက်ခွာသွားသည်။
နောက်ထပ် ရှောင်လွှဲ၍ မရသောအခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ-မကြာခဏတင်ပြီးနောက်ချက်ချင်း ၁-၂ ကီလိုဂရမ်ရရှိလိမ့်မည်။သို့သော်ပုံမှန်အာဟာရလမ်းကြောင်းသို့ပြန်ရောက်ပါက၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်တစ်သျှူးများတွင်သိုလှောင်ထားသောရေဓာတ်ပါဝင်သောကြောင့်ဤအလေးချိန်သည်လျင်မြန်စွာပျောက်သွားလိမ့်မည်။
နိဂုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ သင် (မလိုအပ်သော်လည်း) အမျှင်ဓာတ်နှင့်အာဟာရဓာတ်များကြွယ်ဝသောကျန်းမာသောအရင်းအမြစ်များကို သုံး၍ သင်၏အစားအစာတွင်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုဆွတ်နိုင်သည်။
ကယ်လိုရီများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအရွယ်အစားများကော။
စိတ်ဝင်စားသူအားလုံးသတိထားပါ။ပုံမှန်အားဖြင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောအစားအစာတွင်ကယ်လိုရီရေတွက်ရန်နှင့်အချိုးအစားကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရန်မလိုပါ။စိတ်ဝင်စားလား။ဤစိတ်ကူးသည်ကျန်းမာသောယုတ္တိဗေဒကိုအခြေခံသည်။ ကယ်လိုရီနည်းသော glycemic ဟင်းသီးဟင်းရွက်များမှအသားဓာတ်နှင့်အသား + ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်၏စံပြရောစပ်မှုတွင်ကယ်လိုရီနှင့်ပမာဏအရအလွန်အကျွံစားရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
ဒါပေမယ့်သင်ကယ်လိုရီတွေကိုအလွန်အမင်းရေတွက်ချင်ရင်ဥပမာ၊ သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းကို သုံး၍ အွန်လိုင်းဂဏန်းတွက်စက်ကိုသုံးပါ။၎င်းသည်အမြန်ဆုံး၊ အမှန်ကန်ဆုံးနှင့်အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အကျဉ်းချုပ်သင်၏ကယ်လိုရီဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ၊ သင်၏အဓိကပန်းတိုင်ကိုအာရုံစိုက်ပါ၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၅-၅၀ ဂရမ်နှင့်အသားဓာတ်နှင့်အသားဓာတ်မှကျန်ကယ်လိုရီများရယူရန်
သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်သောအချက် ၇ ချက်ကိုလည်းအနီးကပ်ကြည့်ပါ။
ရေများများသောက်ပါ။ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ပိုလျှံသောအဆီအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှုန်းသည်လုံလောက်သောသောက်သုံးမှုပုံစံ၏အဓိကအားသာချက်များဖြစ်သည်။ပျမ်းမျှအားဖြင့်အလေးချိန် ၁ ကီလိုဂရမ်တွင်သန့်ရှင်းသောရေ ၂၅-၃၀ မီလီလီတာရှိသင့်သည်။ဂျပန်နည်းလမ်းကိုသုံးပါ၊ နံနက်အိပ်ရာမှနိုးလျှင်ရေ ၂၀၀-၃၀၀ မီလီလီတာသောက်ပါ။ကျန်တဲ့ရေကိုပုလင်း ၃ လုံးခွဲပြီးငါတို့နဲ့အတူသယ်သွားတယ်။အထိုင်များတဲ့အချိန်တွေမှာပုလင်းကိုမျက်စိရှေ့စားပွဲပေါ်တင်ပြီးငါတို့ခဏခဏသောက်တယ်။ဒါကြောင့်အစာစားပြီးတိုင်းသင်တစ်နေ့တာလုံးကိုတိတ်တဆိတ်သောက်နိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီသောက်ပါ။ဤအချိုရည်များသည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်သက်သေပြသည်။ဆလိုက်မပါသောကော်ဖီလက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ ဇွန်းသည်ကော်ဖီချစ်သူများအတွက်ပျမ်းမျှလက်ခံနိုင်သောနေ့စဉ်ပမာဏဖြစ်သည်။
မနက်စာအတွက်ပရိုတင်းဓာတ်များစွာမြင့်မားသော satiety နှင့်ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမရှိခြင်းကိုပေးသည်။မနက်စာကိုပရိုတင်းဓာတ်မပါတဲ့သူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျနှုန်းကို ၃၆% အထိတိုးစေပါတယ်။
အမျှင်ဓာတ်ပါသောအစားအစာ။ပျော်ဝင်နိုင်သောနှင့်မပျော်ဝင်နိုင်သောအမျှင်ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည် visceral fat ကိုအလေးထားခြင်းအပါအ ၀ င်ကိုယ်အလေးချိန်ပိုမြန်စေသောတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဝမ်းဗိုက်အရှေ့ဘက်နံရံ)
အဆီလောင်ကျွမ်းစေသောထုတ်ကုန်များ... ဤထုတ်ကုန်များ၏စာရင်းများကို site များစွာတွင်တွေ့နိုင်သည်။ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အသုံး ၀ င်သောအာဟာရများနှင့်ပြည့်သိပ်သိပ်သည်းသောအသီးအရွက်များ၊ လက်ဖက်စိမ်း၊ အချဉ်နို့နှင့်အချို့သောသစ်သီးများဖြစ်သည်။
အပြားလေးများ... နည်းလမ်းသည်ရိုးရှင်းပြီးအများစုအတွက်အလုပ်လုပ်သည်။မည်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုသည်မဆိုတိမ်ပန်းကန်ပြားပေါ်တွင်တည်ကြည်သည်။ပန်းကန်ထဲသို့ထည့်ထားသောတရုတ်ဓားရှည်များနှင့်တူသောမီးဖိုချောင်သုံးပန်းကန်ပြားထဲသို့ထည့်ပါ၊ ထမင်းစားချိန်သည်သိသိသာသာရှည်လာသည်။satiety ၏အချက်ပြမှုသည် ဦး နှောက်ထဲသို့ ၀ င်ရန်အချိန်ရှိလိမ့်မည်၊ သင်စားပွဲမှအချိန်မီထွက်ခွာရန်သင်ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်ရန်မလိုပါ။သင်ဗိုက်ပြည့်နေသောကြောင့်အစာစားခြင်းကိုအလွယ်တကူရပ်တန့်လိမ့်မည်။
လုံလောက်စွာအိပ်စက်ပါ. . . အရာအားလုံးသည်ရိုးရှင်းပြီးဆေးပညာဖြင့်သက်သေပြခဲ့သည်မှာကြာမြင့်ပြီဖြစ်သည်။ ghrelin ဟော်မုန်းသည်ဆာလောင်မှုကိုမြင့်တက်စေပြီးအိပ်ချိန်မရှိစဉ်တက်ကြွစွာထုတ်လုပ်သည်။ထို့အပြင်ပြည့်ဝမှုခံစားချက်အတွက်တာဝန်ယူထားသော leptin ထုတ်လုပ်မှုလည်းလျော့ကျသွားသည်။အဆက်မပြတ်အဖြစ်အပျက်များ၏ကွင်းဆက်သည် ရှောင်လွှဲ၍ မရပါ၊ တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ၇ နာရီမှ ၈ နာရီထိအိပ်မပျော်ခြင်း အစွမ်းအစ။ဒါကြောင့်ဒီဆိုးဝါးတဲ့စက်ဝိုင်းကိုချိုးဖို့လုံလောက်တဲ့အိပ်စက်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါအာဟာရစနစ်သို့ပြောင်းပြီးနောက်ပထမအပတ်၌လူတစ် ဦး သည်သူတို့၏မူလကိုယ်အလေးချိန် ၂. ၅ မှ ၅ ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးသည်။နောက်အပတ်များတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုနှုန်းသည် ၁-၂. ၅ ကီလိုဂရမ်၌အပြောင်းအလဲရှိသည်။
ထို့အပြင်ကျန်းမာသောဇီဝကမ္မဗေဒအတွက်ဂန္တ ၀ င်စည်းကမ်းများသည်လည်းအလုပ်လုပ်သည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် (တစ်ပတ်အထိ) ၎င်းသည်အနည်းငယ်ထူးဆန်းသောကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုထည့်စဉ်းစားသင့်သည်။၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုသေချာစေရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဆီသယံဇာတများကိုလောင်ကျွမ်းစေသောအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင်ပေးထားသောသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိချေ။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်ပါ ၀ င်သောလူများစွာသည်ခွန်အား၊ စွမ်းအင်၊ အကောင်းမြင်မှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ်ငိုက်ခြင်းမရှိသောအခြေအနေများနှင့်ဤအပြုသဘောဆောင်သည့်သရုပ်ပြမှုများသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှမြင့်တက်လာသည်။
သိပ်သည်းဆနည်းသောကိုလက်စထရော ("မကောင်းသော") ကိုလျော့ကျစေသည်။
မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆကိုလက်စထရော ("ကောင်း") ။
ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများသည်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်အဆီဓါတ်များပေါင်းစပ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် somatic သုခချမ်းသာတို့ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောအစားအစာများ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ယခုသင်ကယ်လိုရီလျှော့တွက်ရန်နှင့်အဆီချရန်လိုအပ်သောမျှတသောအစားအစာများထက် ၂-၃ ဆပိုမြန်သည်။
ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းသောအစာသည်အဆီလောင်ကျွမ်းစေသောလမ်းကြောင်း၏ ဦး တည်ချက်အတိုင်းဟော်မုန်းဟန်ချက်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးကြောင်းအထောက်အထားများစွာရရှိခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းထားပါသည်။ဤကဲ့သို့စားသောက်မှုဖြစ်စဉ်၏ကောင်းမွန်မှု၊ စိတ်ကျေနပ်မှုမြင့်မားခြင်း၊ တက်ကြွမှုမြင့်တက်ခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တက်မှုအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိမြင်သုံးသပ်ချက်များသိန်းနှင့်ချီရှိသည်။ဒါကြောင့် "အိမ်မှာကိုယ်အလေးချိန်ကိုဘယ်လိုမြန်မြန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ချမလဲ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက်ငါတို့ရဲ့အဖြေကကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်နည်းတဲ့အစားအစာပါ။
6 သြဂုတ်လ 2021
ဝမ်းဗိုက်နှင့်ဘေးနှစ်ဖက်၌ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ပါးလွှာသောပုံသို့ ဦး တည်ရန်အရေးကြီးသောခြေလှမ်းဖြစ်သည်။လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းကသုံးပတ်အတွင်းမှာသင့်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်နဲ့အစာအိမ်ကိုတင်းကျပ်စေပါလိမ့်မယ်။ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်၎င်းတို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းများကိုဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားသည်။
Doctor Ducan ၏ပရိုတင်းဓာတ်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်ကူညီပေးသည်။
ဆောင်းပါးသည်ကျော်ကြားသော Ducan အစားအစာ၏မူလဇစ်မြစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်မည်သို့လိုက်နာရမည်ကိုရှင်းပြသည်။ပထမအဆင့်အတွက်အပတ်စဉ် Dukan အစားအစာ၏ဥပမာတစ်ခုပေးထားသည်။
5 သြဂုတ်လ 2021